Nin hooyadiis ku dilay Eskilstuna | Somaliska
Booliska magaalada Eskilstuna ayaa toogasho ku dilay nin hooyadiis midi ku dilay. Deriska ayaa booliska ogeysiiyay rabsho ka socotay guriga haweeneyda oo 50 sano jir ahayd markii booliska yimaadeen ayay arkeen hooyada oo meyd ah iyo ninkaan oo midi gacanta ugu jirto. Booliska ayaa amray in uu iska dhigo midida ayagoo toogasho ku dilay ninka asagoo markii hospitalka la geeyay halkaas ku geeriyooday. Booliska ayaa sheegay baaritaanka xaalada in dib loo dhigayo maadaama labada qof ee arintu quseyso ay geeriyoodeen.
Booliska magaalada Eskilstuna ayaa toogasho ku dilay nin hooyadiis midi ku dilay. Deriska ayaa booliska ogeysiiyay rabsho ka socotay guriga haweeneyda oo 50 sano jir ahayd markii booliska yimaadeen ayay arkeen hooyada oo meyd ah iyo ninkaan oo midi gacanta ugu jirto.
Booliska ayaa amray in uu iska dhigo midida ayagoo toogasho ku dilay ninka asagoo markii hospitalka la geeyay halkaas ku geeriyooday.
Booliska ayaa sheegay baaritaanka xaalada in dib loo dhigayo maadaama labada qof ee arintu quseyso ay geeriyoodeen.
Maanta waa sanadguuradii sadexaad ee Somaliska
February 2, 2011 at 16:57
walaal adoo mahadsan waxaan ku darsan lahaa si looogaado marka aad falal dhacay soo qoreysid dadka geestay ama dadka loo geestay sdia hada waxaad soo qortay wiil hoyadiis dilay mana adan soo qrotin cida uu yahay micnaha wadankuu u dhashay ma somalibaa mise waa ajaanib kale mise waa swidhish mahad sanid dadaalkana sii 2 laab somali badan ayaa ku xeran webkaan oo indhaha ku heysa maalin walba mahadsanid mar 2aad.
February 2, 2011 at 18:22
Daadir: waa mahadsantahay markii ay ku cadahay warbixinada ay qoraan wargeysyada iyo idaacadaha Sweden waan soo qori karnaa cida qofka uu yahay balse kuma cadeyn ila wareedyada qofkaan cida uu yahay balse in uusan Soomaali ahayn ayaan filayaa.